iCloud မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကအက်ပဲလ်သည်ပူးပေါင်းခဲ့သည် ဒေတာလွှဲပြောင်းစီမံကိန်းအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အချက်အလက်များကိုအခြားဂေဟစနစ်သို့လွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ ဤစီမံကိန်းတွင်၊ Apple အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂူဂဲလ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်နှင့်တွစ်တာတို့ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ အသုံးပြုသူများအဘို့အကောင်းပါတယ်။
ထိုအချိန်ကတည်းကထိုကုမ္ပဏီများသည်အကြောင်းအရာများကိုတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်သုံးစွဲသူများ၏ကွန်ပျူတာများသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူခြင်းများကိုစတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ Apple ကသုံးစွဲသူများကိုခွင့်ပြုသည့် feature သစ်တစ်ခု၊ iCloud တွင်သိမ်းထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုအားလုံးကို Google Photos သို့ကူးယူပါ.
ဒီ feature အသစ် ရရှိနိုင်ပါသည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နယူးဇီလန်၊ အိုက်စလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ နော်ဝေးနှင့် Liechtenstein အားလုံးနှင့် iCloud တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာများကိုမဖျက်ပါက၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်မိတ္တူတစ်ခုသာဖန်တီးပေးသည်။
1 iCloud မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Google Photos သို့ကူးပါ
iCloud မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Google Photos သို့ကူးပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဒီကိုနှိပ်ပါ link ကိုဘယ်မှာလုပ်သင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple အကောင့်၏အချက်အလက်များကိုထည့်ပါ.
သင်၏အချက်အလက်မိတ္တူတစ်စုံကိုလွှဲပြောင်းပါကဏ္onတွင်၊ ကိုနှိပ်ပါ သင်၏အချက်အလက်မိတ္တူတစ်စောင်လွှဲပြောင်းပေးရန်တောင်းဆိုပါ.
ပြီးရင်ပြပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများစုစုပေါင်းနေရာ။ ကဏ္တွင်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုသင်လွှဲပြောင်းလိုသည့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ၊ drop-down ကို နှိပ်၍ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများကိုရွေးချယ်ပါ (ယခုအချိန်တွင် Microsoft's OneDrive ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများမရှိပါ) ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်တို့အမျိုးအစားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ ငါတို့ကူးချင်တဲ့ဟာများ - ဓာတ်ပုံများနှင့် / သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ။
လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့သင်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြား ကျွန်ုပ်တို့ Google Photos တွင်သိုလှောင်ရန်နေရာအလုံအလောက်ရှိရမည် ကူးယူရန်၊ မဟုတ်ရင်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကူးယူလို့မရဘူး။
နောက်တစ်ဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်များကိုထည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ကော်ပီကူးချင်တဲ့ဂူဂဲလ်အကောင့် iCloud တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာအားလုံး၏လုံခြုံရေး။ အချက်အလက်များကို Google Photos တွင်ထည့်ရန် Apple Data နှင့် Privacy ခွင့်ပြုချက်ကိုပေးရမည်။
နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ် ငွေလွှဲပြောင်းလိုကြောင်းအတည်ပြုပါ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများအတွက်ရွေးချယ်ထားသော iCloud တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာအားလုံး၏။
စမတ်အယ်လ်ဘမ်များ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဓါတ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံ streaming အကြောင်းအရာများ၊ အချို့သော metadata များနှင့်အချို့သော RAW ဓာတ်ပုံများ လွှဲပြောင်းမရနိုင်ပါ, သို့သော် .jpg, .png, .webp, .gif, RAW ဖိုင်များ .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts နှင့် .mkv သည်ဤမိတ္တူကူးယူစနစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကနေယူနိုင်ပါတယ်37 ရက်။ ပြီးသွားပြီဆိုရင် Apple ID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အီးမေးလ်အကောင့်ကနေအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » iCloud မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဂူဂဲလ်ဓါတ်ပုံသို့လွှဲပြောင်းနည်း
iOS 14.5 သည်သင်အား AirTag နှင့်အလားတူစွာခြေရာခံရန်တားဆီးလိမ့်မည်
၈.၉ လက်မ iPad Mini Pro ၏အယူအဆ